Indima kaNadia ekuqhubekeni kwefilimu ethandwa ngokwenene "I-Irony yeFate" yenze udume kuyo yonke indawo yaseSoviet. Ngokukhutshwa kwe-"Admiral" izikrini, ukuthandwa kukaLisa Boyarska kwaphakama kwiindawo eziphakamileyo. Omnye wabalingisi abancinci bexesha lethu wasitshela ngezinto ezenzekayo ebomini bakhe ngoku. Ewe, ndicinga ngolu hlobo okanye kwesi sihloko, kwaye ukuba kukho iingxabano, ndiya kwenza isinqumo esizimeleyo. Kodwa abazali abangabalulekanga kubaluleke kakhulu, ngoko ke, mhlawumbi, ndiya kwenza njengoko bacebisa. Ngokutsho kobulumko bomi, okuphambili, ngokusebenza-kunoko, utata. ULisa Boyarska kunye nobomi bakhe bodwa baxhomekeke ngqo kwi-cinema. Oku kuya kuxutyushwa kwinqaku.
ULisa, ngokwemama wakho, wawungumntwana ococekileyo
Andiyicingi njalo. Nangona ndingazange ndibe neminyaka yokuguquka. Kodwa ngaba oku kulungile kwam? Siyabonga kuphela kubazali kunye nokukhuliswa kwabo. Baye bavumela yonke into, kwaye kwimeko enjalo, umntwana kunye nesiqingatha abafuni. Ndanele ngokwaneleyo ukuba ndihlale egumbini ndize ndidlale ngamadonki okanye ndihambe kunye nomama nobawo ukuhamba. Ngoku, ukuba ndandixelelwa rhoqo ukuba awukwazi ukubeka iminwe yakho kwisikhokelo, ndingayenza.
Yintoni efana nokuba yintombi yaloo mpapa odumileyo?
Kufana nokuba yintombi ye-piano tuner, akukho ntlukwano. Ndiyintombi nje, kwaye ubawo ngubaba nje. Ulwalamano oluqhelekileyo phakathi koyise nentombi. Ngokuqhelekileyo, intsapho esinesiqhelo, iingxaki ezifanayo, ukukhathazeka, njengabanye. Into yodwa-yobugcisa obumbele inquma izihloko zengxoxo etafileni ekhitshini. Kwaye, ke, yayinempembelelo encinane kwindlela yam yokuziphatha nokuziphatha kwam.
ULisa, bathi, awuzange ubukele i-Three Musketeers.
Eyona nto-ayizange ibe yodwa, iincinci kuphela. Ngandlela-thile akuzange kwenzeke. Enye into ifilimu "Mama" kunye ne "Adventures of Viti kunye noMashi". Usuke ufumene izibhengezo ezininzi: "Golden Soffit" ngendima yeGonerilia kumdlalo othi "King Lear", "MTV-Russia" kwinqanaba elithi "Ukuphumelela koMnyaka" ngendima yeTanka kwifilimu "Okokuqala emva kukaThixo" kunye ne-MTV Russia Movie Award ye-Best Actress kwifilimu ethi "i-Admiral". Ndiyolisa? Ndiyakholwa, ukuba nditsho oko kum, akunandaba. Kulungile, kunjalo! Kodwa, ngakolunye uhlangothi, ukuqaphela kwabaphulaphuli kubaluleke kakhulu kunamabhaso.
Ingaba ungumdlalo weqonga okanye umntu we-movie?
Mhlawumbi le midlalo. I-cinema ixhaphaza yonke into eyenziwa yinkosi yam, umlawuli wezemidlalo obalaseleyo uLevi Dodin, wandifundisa. Ngokombono wam, umculi unokuvula kuphela kwisigaba. Kwibala le midlalo, kunomxholo othi "ukuthatha iholo", oko kukuthi, ukudibanisa nabaphulaphuli, ukubamba ingqalelo yabo. Oku kunzima kakhulu, kufuneka wenze umgudu omkhulu. Ngoko umcimbi, ngakwesinye icala, unikeza inkululeko engakumbi, kodwa kwenye - idinga uxanduva oluninzi. Kwi-cinema, ekugqibeleni, kukho ukuphindaphindiweyo, kwaye i-theater - apha kunye ngoku, njengoko bethetha, umzuzu wenyaniso. Oku akuthethi ukuba ndiyathanda amafilimu angaphantsi. Ukudubula kuzisa uvuyo kum.
ULisa, yiyiphi indima ekhoyo ngoku?
Okwangoku, andinakwenza okuningi. Andizi ukuba kutheni. Ndiyinendima kwi-series "MUR", eya kuba kwi-RTR yesiteshi. Nangona kungabalulekanga, kodwa xa ndifunda isicatshulwa endithandayo. Inzulu, inzima, inomdla ... Inyathelo lwenzeka kwi-40s, i-heroine yindoda yomnye weMurovtsi, kwaye uhluke ngokupheleleyo nalawo ndidlulile ngaphambili.
ULisa, ufotshwa kwimifanekiso yembali
Andikwazi ukufumana inkcazelo. Mhlawumbi oku kungenxa yokubonakala, kwaye mhlawumbi, ngokukhetha kwam. Iifilimu zeembali kunye nama heroine alawo maxesha athe kakhulu kwaye anomdla kum.
Ngaba kukho indima eye ikunike ithuba lokuqala ukhetha ukusuka kumkhosi wezinto ezithandayo, kwaye ungenzi konke okulandelanayo?
Nangona njengomfundi, ndandisakhetha. Ndiyabulela uThixo, andizange ndenze iphutha elineendlela ezininzi zokudlala, kunye nabadlali, - kunokwenzeka ukuba banamathele yonke into, benze konke ngexesha. Kwaye kufuneka silinde, sikwazi ukulinda. Ndavumele ukuba ndiyibambe kwaye ndibulele kule nto andinakuyichaza nayiphi na indima endiyifunayo ukuba ndingayibandakanyi kwimisebenzi yamfilimu.
ULisa, ufunda uhlolo?
Ndandidla ukufunda, ndayeka ngoku. Kwaye andikukhubekiswa nonke kwaye ndingachukumiswanga nayiphi na ingxelo engathandekiyo, ndafunda ukubaphatha ngokungafaniyo. Xa abantu begxeka mna, ndibahlonela kwaye ndiyayithanda, ndihlala ndiyamkela ezi mpendulo, ndifikelela kwizigqibo kwaye ndizama ukuphucula. Kwaye ke abantu abacinga okanye bathi, andinandaba. Nangona phakathi kweengcali ezikhokelela kwiikholomu kumaphephancwadi, ezifundwa ngabantu abafundekileyo nabalumkileyo, kukho abalinganiswa abakwazi ukubhala ingxelo engalunganga malunga neefilimu ezintle ezintle. Thatha "i-Avatar" efanayo. Ndimthanda ngokwenene! Emva kwefilimu, ndaphuma phezulu, ndonwabile kakhulu. Nangona, ukuba undibuza ukuba yintoni - i-movie okanye umdla, ndiya kuphendula: ukukhanga. Ndiyayiqonda ngokucacileyo isizathu sokuba engamkelanga i-Oscar. Kodwa ngokufanelekile wayemakishwa ngamagqabantshintshi ngeziphumo ezizodwa, umsebenzi wekhamera. Kwaye zonke iingxelo ezigxekayo zabagxeki ukuba le "i-American bullshit", "engenayo ixabiso lenkcubeko" - amagama ahlaselayo, ehlazisa aba bantu ngokwabo. Ewe, zama ukwenza i-movie okanye ubuncinane olunye usuku ukuhlala kwisethi! Enye yeengxoxo zakho zakuqala zakudala wazi ukuba uvuma ukuba uxoxe kunye neentatheli, kuba le nxalenye yobugcisa. Emva koko isikhundla sashintsha ngokuphawulekayo: unqwenela ukunikezela udliwano-ndlebe, njengoKhabensky, kanye ngonyaka kunye neempapasho ezifanelekileyo.
ULisa, sisiphi isizathu solu tshintsho?
Yonke into ilula! Ngelishwa, andinalo umntu onokuyinqabela into yonke kum, kwaye mna andazi indlela yokwenza ngayo - umgangatho onobugugu wam umlingiswa wam. Ngenxa yokuba andifuni ukucaphukisa umntu okanye ukubiza isizathu esiyiyo sokwenqaba. Andikwazi ukuthetha ukuba andifuni - konke oko. Baya kucinga ukuba ezi ziyimikhwa yam, nangona oku akunjalo. Kule meko, indlela echanekileyo, ngombono wam, kukuthetha kuphela ngeempapasho ezifanelekileyo.
ULisa, wenza ntoni ngexesha lakho lokuzikhethela?
Ukuba kunokwenzeka, zama ukulala. Kodwa akusoloko kuvela.
Sitshele ngohambo olungalibalekiyo
Kungekudala ndabuya e-Australia. Ngaba bekukho ne-Little itamastan yokutyelela. Ngoko ukuzonwabisa okudibeneyo kunye nokunceda. Yonke isahlulo sokuqala sosuku esilichitha kwiilwandle, zihle kakhulu! Leli lizwe libe yinto yam enamandla kunayo yonke. Kukho nantoni na izakhiwo ezikhoyo apho. Kodwa into edalwe yendalo yinto enhle kunakho nawuphi umntu owenzayo. Izinto ezinjalo engazange ndizibonise kwenye indawo. Ngendlela, ndazitholela uhlobo olutsha lokuhamba, apho ndandisoloko ndinomlinganiselo othile wokungabaza. Kufuneka uhambe ngemoto! Thatha imoto, kungeyena mkhulu, kwaye uhambe-ezinye iindlela zifanelekile!
Ngaba uqhube imoto ixesha elide?
Minyaka emihlanu. Ndafunda lula kwaye ndiqhuba ngokuqinisekileyo. Kuphela indlela yokuqhuba umfazi,
kodwa kukho okuqhelekileyo. Ndingumqhubi oqhelekileyo ngenxa yomlingisi.
Ngaba amapolisa ayayeka?
Kwenzeka ... Kodwa abaphendulanga ngandlela-thile, ukuba ngaba nawe. Hlola amaxwebhu, ngenxa yokuphulwa kwentlawulo-ayikho namalungelo. Konke njengesiqhelo.
Ngaba ulungele uhlangothi oluphambene nomsebenzi wakho?
Ayikho. Ndicinga nje, kuba ndinomzekelo phambi kwam amehlo. Kodwa xa ufumanisa oku ngokwakho, kukho uvakalelo oluhluke ngokupheleleyo. Uninzi lwazo andithandi ukupapashwa. Okokuqala, abantu abavela kumaphondo baphupha ngale nto ukuze baphumelele, ukuphumelela uthando, ukunyaniseka kumbukeli. Omnye kufuneka aqonde enye ingongoma: xa ukhona kulo msebenzi, kukho ubuninzi obukhulu bexesha kunye nendawo. Ngethamsanqa, abanqabileyo bendiqonda. Xa ndingenazo izimonyo, kwiingubo zemihla ngemihla, bambalwa kakhulu abantu abanokuzibona nam heroines zam, kwaye ndivuyiswa gqitha.
Ngaba umtshato uyinto ebangelisayo kuwe?
Ndicinga. Ukuba abantu banothando, ukugembula, isondo - yintoni inqatha? Ndiyabathanda abantwana. Nangona ndingafane ndibone abazalwana bam, kodwa ukuba ndilawula, ndichitha ixesha kunye nabo ngokuzonwabisa. Kwaye xa kubonakala ukuba abantwana babo babonakale, kuya kuba yintando enamandla! UNowa ukholelwa ukuba kufuneka ukwazi ukukhusela iimvakalelo zakho.
Ngokubanzi, unikezela ngombono womntu ongavumelekanga
Mhlawumbi. Ngokuqinisekileyo mna, engagqunywanga nantoni na, akukho mida ye-profession, iimeko, ndiba kuphela ekhaya kunye nesangqa sahlobo olusondeleyo. Mna mna ndiyakwazi ukuthetha ukuba inene ndiyintombazana engumfana kwaye ndihleka. Kukho nzima ukukholelwa, kodwa kuyinyaniso!
Ezilishumi zezona ndlela zilungileyo zehlabathi
Abadlali abadumileyo bebholabhokisi yehlabathi
Siyakuhalalisela kunye namakhadi ngoMhla kaMama ngoNovemba 26
Ukusetyenziswa kweoli ye currant kwi-cosmetology kunye neyeza
Ngaba uLeonardo DiCaprio utshata?
Izindlela zokukhulisa abantwana kubazali